192.168.1.1 Login Page, Username, Password uye Wireless pazviruva
Zvita 7, 2018 Denial245
192.168.1.1 || Chii uye sei Login?
The 192.168.1.1 IP kero ndiye default pagedhi dzakawanda Wireless routers uye ADSL modems. Panewo dzakawanda IP kero zvinogona vakakundwa ichi IP Address. nyonyova, 192.168.l.l ndicho chimwe IP kero kuti inonziwo hondo kero. 10.0.0.1 kana 192.168.0.1 pane dzimwe nzira anoziva nzira iri IP kero.
Chii chingaitwa pamwe 192.168.1.1?
Achibatsirwa 192.168.1.1 IP kero, iwe vanobvumirwa kuwana router wako. zvisinei, unofanira kuwana kwavo yepamutemo router arun Panel. Kuita kudaro, unofanira zadza 192.168.1.1 mubrowser wako kero bhaa. Mushure kuwana mukuru router arun Panel, iwe vanobvumirwa kuchinja nzira dzakawanda maererano IP Qos, Lan, wan, DNS, Marshal, samambure utariri, WLAN kurongwa, chibatiso mikana, WPS, DSL, PPPOE, Mac, uye DHCP munhu anoda kubetserwa.
zvisinei, kuvhura mukuru router arun Panel, unofanira 192.168.1.1 Login Chekutanga. saka, kana uchida 192.168.1.1 Login kuti kuwana yepamutemo router arun Panel, tapota tarisa zvinotevera romukova.
Sei login 192.168.1.1 IP Address?
raida matanho ose kusvikira 192.168.1.1 Login akaitwa pasi pazasi. Ndapota kutevera ataurwa pazasi danho nedanho nhungamiro maererano kuti Login 192.168.1.1 zvinobudirira.
In wokutanga chaizvo danho, mhando http:://192.168.1.1 muruoko Browser wako kero pakapuranga kuti danda kuti router yako.
ikozvino, Kupinda kwako zvechokwadi Username uye pasiwedhi kuti Login kuti router wako.
Mushure kuwana mukuru router arun Panel kana 192.168.1.1 Login, iwe vanobvumirwa kuchinja nzira dzakawanda maererano IP Qos, Lan, wan, DNS, Marshal, samambure utariri, WLAN kurongwa, chibatiso mikana, WPS, DSL, PPPOE, Mac, uye DHCP munhu anoda kubetserwa.
Zvinokosha kupa Username zvechokwadi uye pasiwedhi. saka, asati kutamira kune Login zvichiitwa, ndapota nechokwadi kuti une Username zvechokwadi uye pasiwedhi kuvhura router arun Panel.
Kana musingadi kurangarira yenyu Username uye pasiwedhi mashoko, kutevedzera mirayiridzo pazasi.
Zvokuita kana iwe akakanganwa wako router kuti Username uye pasiwedhi?
Zvinokosha kupa Username zvechokwadi uye pasiwedhi. saka, asati kutamira kune Login zvichiitwa, ndapota nechokwadi kuti une Username zvechokwadi uye pasiwedhi. Kana musingadi kurangarira yenyu Username uye pasiwedhi mashoko, kutevedzera mirayiridzo pazasi.
Kana usingazive Username yako pasiwedhi uye akanga achinja Username uye pasiwedhi kusvikira ikozvino, Saka edza kuwana navo inotora pamwe router wacho Serial nhamba uye Login kero.
Kana iwe akashandura password uye nganwa uchawana kuti itangezve kuti router kana Modem kuti fekitari pazviruva. Pane zvakavanzika Reset bhatani pamusoro ose Wireless router kana ADSL Modem. Kuti adzorere router shure kuti fekitari pazviruva, unofanira kubata bhatani nokuda 10 masekondi kushandisa tsono kana munongoro.
Unogona login kuti router yako kuongorora Username uye pasiwedhi mazita ambotaurwa pazasi.
Kana usingazive Username yako pasiwedhi uye akanga achinja Username uye pasiwedhi kusvikira ikozvino, Saka edza kuwana navo anotaurwa pazasi inotora pamwe router wacho Serial nhamba uye Login kero.
192.168.1.254 arun admin / pasiwedhi
10.1.1.1 (hapana) MiniAP
saka, shamwari, uku ndiko kuti ndiko yandaigara pano danho nedanho nhungamiro pamusoro sei 192.168.1.1 Login kuti kuwana yepamutemo router arun Panel uye sei kuwana pasiwedhi uye Username kana iwe vakanga varasikirwa Username wako uye pasiwedhi kana.
zvisinei, kana muine chero mubvunzo pamwe 192.168.1.1 Login Procedure, ndapota tisazovakumbira pfungwa dzenyu.
Next Post:Sei Tsvaka 192.168.0.1 IP Router Login uye Administration